China C-ngocingo yokulungisa Vulcanizing Press for Rubber Belt Spot Ukulungisa ifektri abakhiqizi | U-Antai
I-C-clamp Repair Vulcanizing Press yokuLungisa i-Rubber Belt Spot
YXhydraulic indawo ukuvuthisa umshini wokulungisa, owaziwa nangokuthi yi-C-clamp ukulungisa indawo vulcanizer, ngu ukushisa kagesi imishini yokulungisa ibhande elihambayo. Ngesikhathi ukudlulisa ibhande, ingaphezulu lebhande lingalimala noma lihlatshwe yi dlulisaimpahla ed. Ngemuva kwalokho i- indawo ukuvuthisa umshini wokulungisa ingasetshenziswa ukukulungisa.
Umshini uqukethe uhlaka, amapuleti amabili okushisa, i-lifter hydraulic ehlanganisiwe kanye ne-controbox kagesi. Uhlaka lwenziwe ngamandla aphezulu e-aluminium alloy, it’s smalsize, ephathekayo, iphephile futhi ithembekile. Lo mshini usetshenziselwa ikakhulukazi ukulungisa umonakalo ongaphansi kwamachashazi angama-300 * 300mm.
Idizayinelwe ukulungiswa okusheshayo nokusebenza okulula kokulimala kwendawo;
Idizayini yama-duawheels, yenza ukuhamba kube lula;
Ifreyimu yohlobo lwe-C ekhanyayo futhi emangelengele, efanelekile ukubeka indawo eyonakele yendawo;
Uma indawo yokulimala kwebhande ingekho enkulu kakhulu, njengamachashazi, ibala noma okuncishisiwe, awudingi ukusebenzisa umshini omkhulu ukuyilungisa. Ukulungiswa kwe-C-clamp spot vulcanizing press kungaba yisinqumo esihle. Isabelomali esincane, kepha lungisa inkinga enkulu.
Ubukhulu （L * W * H mm）
I-YXL-200 × 200
I-YXL-350 × 350
I-vulcanizer yebhande inokwethenjelwa, umshini osindayo futhi ophathekayo, osetshenziswa kakhulu emkhakheni wezinsimbi, izimayini, izitshalo zamandla, amachweba, izinto zokwakha, usimende, imayini yamalahle, imboni yamakhemikhali, njll.
Hambisa umshini endaweni yokulungisa.
Gcwalisa i-glue ezindaweni ezilimele ezidinga ukulungiswa.
Beka ifreyimu ngaphansi kwebhande bese uyiqondanisa nendawo eyonakele.
Beka ipuleti lokushisa eliphansi ngaphansi nje kwendawo ebonakele yebhande bese ufaka ifreyimu engenhla.
Cindezela isigwedlo se-hydraulic size sifinyelele ezingeni lokucindezela elanele.
Xhuma ikhebula eliyinhloko kumthombo wamandla nebhokisi lokulawula ugesi. Bese uxhuma ikhebula lesibili nebhokisi lokulawula namacwecwe aphezulu naphansi.
Sicela wazi ukuthi kufanele ifane nezimpawu ezihambisanayo ebhokisini lokulawula.
Vula ibhokisi lokulawula bese uqala inqubo yokulungisa i-vulcanizing.
Langaphambilini I-PU PVC Belt Vulcanizing Press ye-Thermoplastic Belt Splice
Olandelayo: Umshini We-Spot Repair Repair Vulcanizing Press we-Conveyor Belt
Cc Belt Vulcanization Cindezela
Cindezela Okujwayelekile kwe-Belt Vulcanization
Inayiloni Belt Vulcanization Press
I-Vc Belt Vulcanization Press
Isitimela Esikhweze Isikhala Ukulungisa I-Vulcanizing Press ye ...